पाटन, वीर र टिचिङ अस्पतालले नै पूरा गरेनन् १०० बेडको 'एचडियू' थप्ने काम :: विवेक राई :: Setopati
पाटन, वीर र टिचिङ अस्पतालले नै पूरा गरेनन् १०० बेडको 'एचडियू' थप्ने काम
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पाटन, वीर र टिचिङ अस्पताललाई एक-एक सय क्षमताको हाइ डिपेन्डेन्सी बेड (एचडियू) थप गर्न निर्देशन दिएपनि तीन वटै अस्पतालले सो काम पूरा नगरेको खुलेको छ।
गत कात्तिकमा कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा पुगेका बेला मन्त्रालयले यी तीन वटै अस्पताललाई कम्तिमा एक-एक सय एचडियू बेड तयार गर्न भनेको थियो। तर छ महिना बितिसक्दा पनि यी कुनै अस्पतालले एक सय बेडको एचडियू तयार पारेका छैनन्।
अझ पाटन अस्पतालले त एउटा पनि नयाँ एचडियू थप गरेको छैन। अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्यले नयाँ एचडियू थप गर्ने कुरा कार्यान्वयन नभएको सेतोपाटीसँग बताए। 'पछि संक्रमण नै कम भइसकेको अवस्था थियो। त्यसैले एउटा पनि एचडियू थप गरेको छैन,' उनले भने।
कोरोना संक्रमणको जटिल अवस्था भएका विरामीलाई आइसियू अभावमा सो सरह सेवा पुर्याउने गरी एचडियू बेड प्रभावकारी रहने मानिन्छ। यसबाट संक्रमितलाई अक्सिजन सहायतामा उपचार गर्न सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन्।
सरकारले पनि गत कात्तिकमा संक्रमण दर उच्च हुँदा अस्पतालमा आइसियू अभाव हुन सक्ने भन्दै देशभर कम्तिमा ६ हजार एचडियू बेड थप्ने तयारी अगाडि बढाएको थियो। सोही अन्तर्गत मन्त्रालयले यी तीनटै अस्पताललाई सर्वाधिक सय वटा एचडियू बेड तयार पार्न भनेको थियो।
पाटनका निर्देशक डा. रवि शाक्यले भने मन्त्रालयले सहयोग नगर्दा एचडियू थप गर्न नसकिएको जवाफ दिए। उनले भने, 'एकचोटि गर्नु भन्यो त्यसपछि हामी तयार छाैँ भन्दा त्यो बेला सहयोग भएन,' उनले भने। तर मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भने त्यतिबेलै सबै अस्पतालहरूलाई एचडियू बेड थप गर्नका लागि बजेट निकासा गरिएको बताए।
मन्त्रालयका अनुसार सुरुमा ६ हजार एचडियू बेड थप्ने तयारी गरिए पनि ३ हजार बेडका लागि बजेट निकासा गरिएको हो। 'सुरुमा आइसियू बनाउँदा सहयोग भएको हो। एचडियू बढाउने कुरामा हामीले सहयोग पाएका छैनाैँ,' निर्देशक शाक्यले दाबी गरे।
यस्तै वीर अस्पतालका निर्देशक डा. शान्ता सापकोटाले पनि मन्त्रालयले तयार पार्न भनेको सय एचडियू बेडको व्यवस्थापन भएको भन्दै आलटाल जवाफ दिएकी छन्। उनले परेको अवस्थामा सय बेडको एचडियू सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको बताइन्।
यद्यपि बेड तयार भयो भन्ने प्रश्नमा निर्देशक सापकोटाले बेड संख्या खुलाइनन्। उनले परेको अवस्थामा सय बेड नै चलाउन सक्ने गरी तयार रहेको भन्दै बचाउ गरिन्।
यस्तै सय बेड एचडियू तयार गर्न जिम्मेवारी पाएको टिचिङ अस्पतालले पनि जम्मा ५० बेड तयार पारेको छ। अस्पतालका निर्देशक डा. दिनेश काफ्लेले सयमध्ये ५० वटा एचडियू बेड तयार भएको बताए।
'५० बेड तयार छ। बाँकी बेड उपकरण नआउँदा तयार गर्न सकिएन। ल्याउनेले पनि कहिले पन्ध्र दिन, कहिले एक महिनामा आउँछ भनेर ल्याएन,' निर्देशक काफ्लेले भने, 'अब उपकरण आयो भने थप बेड पनि तयार हुन्छ।'
उनले अहिले तयार भएका एचडियू बेडहरू कतिपय 'नन कोभिड' विरामीका लागि प्रयोग भइरहेको भन्दै अब खाली हुनसाथ कोभिड संक्रमितका लागि प्रयोग गरिने जनाए।
अस्पतालहरूले एचडियू बेड थप्ने काममा अटेर गरेपछि मन्त्रालयले तीन दिनभित्रै तोकिएका सबै अस्पतालहरूलाई एचडियू बेड थप गरेको प्रगती विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ।
साथै तोकिएको बेड थप गर्न नसक्ने अस्पताललाई कारण खुलाउन भनिएको भन्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले थप नगर्ने अस्पताललाई कारवाही गरिने बताए।
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १२, २०७८, ०९:१८:००